Jason Oakley's Lahatsoratra momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jason Oakley
Manandrana manome anao ny volako aho - maninona no dia ataonao mafy toy izao? Izany dia fahatsapana iraisan'ny mpividy B2B maro. Taona 2020 izao - maninona isika no mbola mandany fotoana amin'ny mpividy (sy ny fotoantsika manokana) amin'ny fomba fahagola maro be? Ny fivoriana dia tokony haharitra segondra vao hamandrihana fa tsy andro. Ny hetsika dia tokony ho an'ny resaka misy dikany fa tsy aretin'andoha. Ny mailaka dia tokony ho voavaly amin'ny minitra vitsy, fa tsy ho very ao amin'ny boaty. Ny fifandraisana rehetra eo amin'ny